Pet Nail Clippers Abakhiqizi & Abahlinzeki | Ifektri yaseChina Pet Nail Clippers
Isikere se-Pet Nail Sezinja ezinkulu
1. Isikele sezipikili sezinja ezinkulu kulula ukusisebenzisa, ukusika kuhlanzekile futhi kunembile, futhi basika baqonde ngqo ngengcindezi encane.
2. Amacembe akulesi siqeshana angakwazi 'ukugoba, ukuklwebha noma ukugqwala, futhi kuzohlala kubukhali ngemuva kokusikwa okuningi, noma inja yakho inezinzipho ezinzima. Isikere sezipikili sezinja ezinkulu sinekhasi lekhethelo lensimbi engagqwali kakhulu, elizonikeza isipiliyoni sokusika esinamandla futhi esihlala isikhathi eside.
3. Izibambo ezingasheleli zikhululekile ukubamba. Kuvimbela isikere sezipikili sezinja ezinkulu ukushibilika kwezinja ezinkulu.
Pet Nail Clipper Futhi Trimmer
I-1.Pet Nail Clipper ne-Trimmer ngenqubo yokunqampula elayishwa entwasahlobo yesenzo sokusika esisebenza kahle.
2. Ilokhi yezokuphepha, yenza isilwane sokuchofoza isipikili nesinciphisi esimweni esivaliwe lapho singasetshenziswa.
3. Ukubamba kwe-ergonomic kuklanyelwe ukubumba i-ergonomic esandleni sakho ukuze uthole ukunethezeka nokunwebeka kokusetshenziswa kusiza ukuvimbela ukusikeka kwezipikili ngengozi. Mane uziqonde ngokujwayelekile njengoba usebenzisa ingcindezi.
4.Uma zingasetshenziswa, i-Pet Nail Clipper And Trimmer ingakhiywa ngamabhande endaweni evaliwe. Ngeke uzisike ngengozi lapho ukhipha ekhabetheni.